Dhalinyarro soomaali ah oo loo heeysto kufsi ay u geeysteen haweeney 40 jir ah | Somaliska
Dhalinyarro lugu sheegay ineey yihiin saddex soomaali ah ayaa lugu soo oogay dacwad la xirriirta kufsi ay u geeysteen haween 40 jir ah.
Haweeneeydan ayaa wararku sheegayaan in ay kooxdaan ay ka jidka kaga soo qaadeen mooto ay wadeen, waxaana markaa ka dib ay u geysteen kufsi.
Falkan ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Barkarby ee duleedka magaaladda Stockholm jimcihii ina soo dhaafay. Qoraal ay boolisku soo dhigeen bartooda internet-ka ayey ku sheegeen in ay raad gureen mootadii lugu soo qaaday haweeneydaasi. Raggan oo da’doodu kala tahay 16, 17 iyo 18 jir.
Dhageeysiga dacwada oo ka socotay maxkamadda ayaa waxaa ay dafirireen eedeymaha loo heeysto iyagoo u sheegay qareenadii u doodayey iyo tarjumaan soomaali ah oo ku sugnaa maxkamadda. Wargeyska Aftonbladet ayaa isagoo soo xiganaya mid ka mid ah baarayaasha sheegay in la helay raadka raggaas ee la xirriira dembiga lugu eedeeynayo. Iswiidhan ayaa sharcigeeda dhigaya in afar sanno lugu xukumo ciddii geeysata fal kufsi ah, balse wiilashan oo da’dooda ay hooseeyso ayaa suuragal ah in laga qafiifiyo ciqaabta.
Mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo badanaya falalka foosha xun ee dhalinyaradda soomaalida loo xiro, dhawaan ayey aheyd markii fal noocaan ah loo soo qabtay dhalinyaro kale kufsi ay u geeysteen gabar 14 jir ah.